Xog:-Dawladda Somalia oo dayacday Fursad Sirdoon, kadib Shaacintii Horjoogihii la qabtay. – Hornafrik Media Network
Wasaaradda Amniga ee Somalia waxay soo bandhigtay Madixii Amniyaadka Kooxda Alshabaab ee Gobalka Banaadir, C/wahaab Khaliif Axmad “Ciise Tarabuun” oo laga soo qabtay Suuqa Bakaaraha, Waxayna Wasaaraddu Saxaafadda u sheegtay Magaca iyo Xilka uu hayay Horjoogahaas 2 Saacadood kadib markii la soo qabtay.
Warar ay heshay Hornafrik ayaa sheegaya in Saraakiisha Nabadsugiddu ay ku taliyeen inaan la shaacin soo qabashadda Horjoogahan inta laga helayo Xogta loo baahan yahay, isla markaana lagu soo qab qabanayo Saraakiishii la shaqaynaysay iyo Hubkii ay ku hawl galayeen, Laakiin Wasiirka Amniga oo aan lahayn Khibrad Amni ayaa ku gacan sayray markiibana la hadlay Saxaafadda oo shaaciyay Magaca Horjoogaha la qabtay.
Maxaa ka dhalan kara Shaacintaas,?
Ma ahan Wax cusub Saraakiisha Alshabaab ee la soo qabto, Laakiin waligeed ma dhicin Sarkaal sidan muhiim u ah in Saacado Gudahood marka la soo qabto la shaaciyo Xogtiisa oo dhan. Waxayna taasi keenaysaa inaan la helin Macluumaadkii loo baahnaa.
Sarkaalka la soo qabtay waxaa laga yaabaa inaysan Dhalinyaraddii la shaqaynaysay xog badan ka hayn qabashadiisa, Sidoo kale in Kooxdu aysan ku baraarugsanayn in la qabtay ayaa dhici karta. Waxayse Dawladdu lumisay Fursad looga faaiidaysan lahaa Xogtii uu hayay Sarkaalkan, iyadaana Dawladdu markii si aysan ku gaari lahayn Xogta Qabashadda Kooxdu u gaarsiisay meel walba.
Ma ahan mid ku filan in 2 Saacadood Gudahood looga faaiidaysto Xogta uu hayo Sarkaalkan, Waxayna ahayd in ugu yaraan loo kaadiyo Usbuuc, intaasna Meelaha uu tilmaamo Horjoogaha la qabtay in laga sameeyo Hawlgalo, taasoo fududayn lahayd inay dhabar jab ku noqoto Kooxda, Isla markaana micno u samayn lahayd Qabashadda Horjoogahan.
Dhamaan Meelihii ay yaaleen Qalabka Ciidan ee uu Horjoogahan ka warqabay markii laga maqlay Iclaamka ayaa laga bixiyay wixii yaalay, sidoo kale Guryihii uu yaqaanay ee ay daganaayeen Saaxiibadiis ay isla shaqayn jireen dhamaantood waa la faarujiyay oo Caawaba qofna kuma hoyanayo, sidoo kale dhamaan Taleefoonaddii uu yaqaanay waa la badalay.
Tallaabooyinkaas oo dhan waa kuwa ay amreen Horjoogayaashii kale ee Alshabaab ee la shaqaynayay si ay u xakamaysnaato ka faaiidaysiga Xogta uu bixin karo Saaxiibkood oo hadda gacanta ugu jira Dawladda. Waana Fursad ay bixisay Wasaaradda Amnigu in Kooxdu ay kaga diyaar garoowday Macluumo kasta oo laga heli karo Saaxiibkood Ciise Tarabuun.
Maxay Faaiido leedahay Qabashadda Horjoogayaasha,?
inta badan Saraakiisha Alshabaab ee Muqdisho ka hawl galla ma ahan kuwo haya Xog badan oo la xiriira Kooxda, waxay yaqaanaan Meelo kooban oo ay dagan yihiin Dadka iyaga la shaqeeya, laguna qariyo Hubka uu markaasi Masuul ka yahay. Waxaana adag inuu xittaa ogaado Hubka iyo Qalabka Unugyadda kale ee Ururka ee kala hawl galla Magaaladda, taasoo ay uga dan leeyihiin in haddii la qabto inaysan dhabar jab ku noqon Kooxda.
Horjoogayaashii ugu sareeyay ee Alshabaab ee la qabto waxaa ka mid ahaa Zakariye Ismaaciil Xirsi oo ahaa Madaxii Sirdoonka Alshabaab, Gallad Illeey oo ahaa Madaxii Muqaabaraadka Gobalka Banaadir, Xasan Xanafi Madixii Iclaamka ee Kooxda, Kabageed oo ahaa Madixii Kooxda Baabuurta dadka ku horjarta, Xasan Fanax Madixii Wacyi Galinta Kooxda iyo kuwa kale oo muhiim ahaa, dhamaantoodna lagama faaiidin wax Macluumaad. sababtuna waxay tahay marka horaba Kooxda Macluumaadkeeda Muhiimka ah dadka laga heli karo way kooban yihiin, waana kuwo aan la qabin karin in Diyaarado lagu dillo ma ahanee.
isku soo duuboo Dawladda Federaalka Somalia waxay dayacday Fursad Muhiim ah oo ay ku heli kartay Xogta Kooxda dhaqdhaqaaqyadeeda Gobalka Banaadir. Waxayna ku badalatay Xogtii ay heli lahayd inay ku faanto inay qabatay Horjooge Muhiim, taasoo xittaa haddii ay tahay in lagu faano loo dhigan karay Dib, isla markaana la xakamayn karay Xogta ku aadan in la qabtay Horjoogahan.
Farmaajo Oo Lacag Iid siiyay Agoon, Xageey ka soo gashay Lacagtaasi,?